Izindlwana Zasemgwaqweni ze-King - I-Poppy - I-Airbnb
Izindlwana Zasemgwaqweni ze-King - I-Poppy
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Vanessa
I-Poppy Cottage yindlwana yethu enkulu enosofa olalayo. Usofa ugoqa kuphela usayizi wombhede owodwa. Zonke izinto zombhede zihlinzekwa ku-closet yekamelo lokulala. Kungakhathaliseki ukuthi ungumndeni omncane ongu-3, uzozwa ukunethezeka kwendawo. Sicela uqaphele ukuthi indlu yokugezela idlula ekamelweni lokulala.
Ihlotshiswe kahle futhi iklanywe ngu-Vanessa, umnikazi wendlu. Yizwa ubumfihlo bekhaya lakho, kuyilapho uhlanganyela igceke elingu-1 le-BBQ yakho noma uhlale uzungeze umgodi womlilo ukuze ufudumeze kusihlwa.
Ihlonyiswe ngokugcwele ikhishi, igumbi lokuphumula elingu-1, ikamelo lokulala elingu-1 negumbi lokugezela elingu-1.
Kungakapheli imizuzu engu- ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya ngasolwandle, nasezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela. Indawo enhle yokushaywa wumoya okumnandi ekuphileni okumatasa kwedolobha.
Hamba emgwaqweni futhi ufinyelele phambili emanzini olwandle amangalisayo, vakashela amamnyuziyamu aseduze namathilomu. Zonke lezi zindawo ziphakathi kwemizuzu engu-5 kuya kwengu-7 uhamba ngezinyawo.
Umgodi womlilo nendawo yokosa kanye nendawo yokudlela yangaphandle. Izilwane ezifuywayo azivunyelwe, noma kunjalo uma unesidingo esikhethekile, sicela usithinte kuqala futhi sizothola isixazululo esifanele.
I-TV ene- I-Amazon Prime Video, I-Roku
4.65 · 63 okushiwo abanye
Isifunda sinikeza izindlela eziningi zokuhamba ongazijabulela ngesikhathi uhlala. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuhlala uphumule, noma iholidi elisebenzayo, i-Poppy ehlome ngokuphelele ihlezi ilapha ukuze ikwemukele futhi uphumule endaweni yethu yangasese.
Idolobha lamagugu, iminyuziyamu, izindawo zokudlela namabhishi amahle eduze. Indawo emaphakathi yokuhlola ichopho eliseningizimu yeNova Scotia!
Ngizotholakala ngemibuzo futhi uma udinga noma yini njengoba ngisendlini enkulu.